Global Voices teny Malagasy » Niteraka Fahatezerana Manerantany Ilay Mpanao Gazety Hongroà Nandaka Syriana Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Septambra 2015 10:27 GMT 1	 · Mpanoratra Lourdes Sada Nandika (en) i Laura, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Hongria, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Petra Laszlo. Sary avy amin'ny habakat RVF, CC BY-NC 4.0 license
Nanjary iray amin'ireo olona hankahalaina indrindra ao amin'ny media sosialy ilay mpanao gazety Hongroà Petra Laszlo, taorian'ny fandefasana lahatsarary iray mampiseho azy mamingana sy mandaka mpitsoa-ponenana Syriana maromaro izay nandositra ny polisy tao Röszke, Hongria .
Tampoka tamin'ny Eoropeana ny krizin'ny mpitsoa-ponenana mba handaminana izany. Ary raha mbola very ao anaty adihevitra tsy misy fiafarana sy tsy mety tonga amin'ny fifanarahana ireo mpanao politika, mizarazara kosa ny olom-pirenena. Maro ny olom-pirenena manohana ny ezaka atao mba hanomezana fialokalofana ho an'ireo fianakaviana mandositra ny ady ankehitriny ary misy mihitsy aza ny sasany manome ny tranon'izy ireo manokana mba hampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana. Ny maro hafa kosa na izany aza, mbola miahiahy ary mahita ity “firohotra” ity ho toy ny loza mitatao amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina, sy ny fivavahan'izy ireo. Nandrisika ireo tahotra isan-karazany momba ny mpitsoa-ponenana ihany koa ny governemanta mpandala ny nentim-paharazana ao amin'ny firenena Eoropeanina sasany, anisan'izany ny Filoha Hongroà Viktor Orbán , izay vao tsy ela akory niampanga ireo mpitsoa-ponenana Miozolomana ho mampidi-doza ny Kristianina ao Eoropa .
Miala ao Tiorka tonga ao Eoropa amin'ny alalan'ny “lalana Balkan,” mandalo ao Gresy,  Makedonia , sy Serbia  ireo mpitsoa-ponenana Syriana. Rehefa tafiditra ao Hongria, tazomina ao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Röszke izy ireo, izay ambenan'ny polisy Hongroà mafy. Manantena hihazo an'i Alemaina ny ankamaroan'ny mpitsoa-ponenana, tsy noho izy firenena ahitana tombotsoa betsaka indrindra ao Eoropa, fa satria koa maro amin'izy ireo no manana fianakaviana na namana efa monina ao.
Maro tamin'ireo teny an-dalana hihazo an'i Alemaina ankehitriny no matahotra ny fampiharana ny Fitsipika Dublin , izay manery ny mpitsoa-ponenana hangataka fialokalofana na inona na inona firenena Eoropeana ahatongavan'izy ireo voalohany. Na dia efa nanaiky hampiato ny fampiharana ity fitsipika ity aza i Alemaina, tsy matoky ireo manampahefana ny mpitsoa-ponenana ka miezaka hihazo an'i Alemaina haingana araka izay azo atao mba tsy ho tratra eny an-dalana.
Naka sary ny iray amin'ireo fahatongavan'ny mpitsoa-ponenena marobe ireo ilay mpanao gazety Petra László, raha tratra tao anaty lahatsary ny fihetsika nataony niteraka resabe. Niparitaka be tao anatin'ny ora vitsy nandraketana azy ny lahatsary. Hita mazava tsara mandaka ankizy roa nihazakazaka miaraka amin'ny ray aman-dreniny i Laszlo. Avy eo, namingana mpitsoa-ponenana iray nitondra zazakely teo an-tsandriny i Laszlo, nahatonga ilay mpitsoa-ponenana nianjera niaraka tamin'ny zaza :
Manana fifandraisana amin'ny faran'ny ankavanana sady mpanohana ny antoko nasionalista Hongroà, Jobbik i Petra László, miasa ao amin'ny fantsom-baovao TV N1. Nandroaka an'i László avy hatrany ity fahitalavitra ity taorian'ny fivoahan'ny lahatsary tamin'ny aterineto. Tao anatin'izany, nanome fanehoan-kevitra marobe ireo mpiserasera, maneho ny hatezeran'izy ireo manerana izao tontolo izao;
Avy ao Torkia, Eyüp Gökhan Özekin manoratra hoe:
#PetraLaszlo Tena tsy mifaditrovana, andray ry “vehivavy” maharikoriko (!). Malahelo aho mizara ny planeta miaraka aminao. Manantena aho fa hizaka ny nataonao ianao.
Tao Bruxelles, mampahatsiahy an'i Laszlo ny tantaran'ny korontana manokana tao Hongria i Marcel Sel :
Remember, #PetraLaszlo , your parents could have been among these Hungarian refugees. #1956 https://t.co/IUOS20dG59  — Marcel Sel (@marcelsel) September 8, 2015 
Tsarovy, #PetraLaszlo , tokony ho anisan'ireo mpitsoa-ponenana Hongroà ireo ny ray aman-dreninao. #1956
Mamazivazy am-piesoesona ireo olon-kafa ao amin'ny fampahalalam-baovao ilay mpisera Twitter Espaniola malaza Señorita Puri :
Voaroaka ilay mpanao gazety Petra László noho ny fidarohana ireo mpitsoa-ponenana Syriana. Nandray an'i Petra László hiasa i Donald Trump.
Ao Gresy, hentitra ny tenin'i dimbit:
Maniry anao ho faty miadana sy maharary aho #PetraLászló 
Mpanao gazety Hongroà Szabolcs Panyi kosa nampiseho ny sarin'ilay lehilahy nanjera ny zanany izay teo an-tsandriny, noho i Laszio:
Ilay lehilahy nodakan'i #PetraLaszlo . Fantatra fa nampijaliana teo ambanin'ny fitondran'i Assad izy ary nandositra ny ISIS izy
Tao amin'ny Facebook, mahery vaika avokoa ny feo rehetra. Nahazo fanehoan-kevitra tezitra an'arivony ireo lahatsoratra marobe momba ny zava-nitranga navoakan'ny tranokalam-baovao ao amin'ny tambajotra sosialy :
Faly aho fa tsy an'asa izy ankehitriny, tokony ho tsy manan-kialofana ihany koa izy. Avy eo, angamba mety ho fantany izany hoe fiainana hatrehin'ny ankamaroan'ireo olona ireo.
Tsy mino aho fa manao fanahy ianiana mandratra tanora tahaka izao ny vehivavy … olona marary mikorontana tsy manana famindram-po, fiarahamiory na fiantrana. Afaka manao zavatra tsy misy olona tahaha azy isika eto amin'izao tontolo izao!
Vehivavy mpanao gazety tsy mifaditrovana. Marobe ny tsy ampy aminy amin'ny maha- mpanao gazety sy olo-tsotra azy …. Te-hahita azy eo amin'ny toeran'ireo Syriana mahantra ireo aho ary mahita olona manao tahaka izany aminy“
Angeles  Alvarez Menendez 
Misaotra ry lanitra … alefaso ao Syria izy ankehitriny mba hahita raha tiany ny miaina ao anatin'ny fanafihana na hahita azy ireo hanapaka ny lohany satria Kristianina izy!
Ao anatin'ireo feo mitsikera ity vehivavy ity, dia misy ihany koa ireo izay miaro azy, na dia amin'ny fanehoan-kevitra tsy tsara tahirinkevitra aza:
Eny, mijaly ny olona sy ny rehetra, saingy tsy misy olona mahatsapa ny fahavoazana aterak'izany any amin'ny toerana ahatongavan'izy ireo? Ary ahoana indray ny amin'ny fihetsika mahatsiravina asehon'izy ireo amin'ny fanampiana izay omen'ny Vondrona Eoropeana azy ireo? Tsorina, raha itarina dia tsy mendrika ny fanampiana omena azy ireo ireo “olona” ireo.
Mampiseho mazava kokoa ny ahiahin'ny Eoropa momba ny firohotry ny mpitsoa-ponenana vaovao ihany koa ity tranga ity. Namela ity fanehoan-kevitra ity ny mpamaky iray ny gazety Frantsay antserasera 20minutes.fr  :
Tokony hazavain'ny Vondrona Eoropeana tsara amin'ireo firenen'ny vondrona Tatsinanana taloha ireo fa manana ny hasiny isika aty Andrefana. Mino aho fa ao Hongria sy Polona, ohatra, tsy mandray mpitsoa-ponenana mihitsy izy ireo, saingy mandray fanampiana am-pifaliana avy amin'ny Eoropeana. Manomboka izao, tokony ho mpitsoa-ponenana sy fanampiana izany na tsy misy mpitsoa-ponenana dia tsy misy fanampiana.
Nandefa fialan-tsiny tamin'ny taratasy misokatra i Laszlo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/16/74518/
 manohana ny ezaka atao mba hanomezana fialokalofana : https://es.globalvoicesonline.org/2015/09/04/cientos-de-austriacos-y-alemanes-acuden-a-dar-la-bienvenida-a-refugiados-que-llegan-de-hungria/
 Viktor Orbán: https://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n
 mampidi-doza ny Kristianina ao Eoropa: http://www.huffingtonpost.es/2015/09/03/orban-_n_8081748.html
 Tiorka : https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
 Fitsipika Dublin: https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Dubl%C3%ADn
 September 9, 2015: https://twitter.com/eyupgokhan/status/641677213151178753
 September 8, 2015: https://twitter.com/marcelsel/status/641341772967206913
 September 8, 2015: https://twitter.com/SenoritaPuri/status/641329503348871168
 September 8, 2015: https://twitter.com/dimbit/status/641313636603011072
 September 9, 2015: https://twitter.com/panyiszabolcs/status/641717043126005761
 Belle Lindsay : https://www.facebook.com/BreakfastonONE/posts/10153544694317719?comment_id=10153546321492719&offset=0&total_comments=29&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 Maxine Millner: https://www.facebook.com/BreakfastonONE/posts/10153544694317719?comment_id=10153544933717719&offset=0&total_comments=61&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 Rafael Eduardo Rodriguez : https://www.facebook.com/elsalvadorcom/posts/947662588603648?comment_id=947723751930865&offset=0&total_comments=674&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 Tito Nochez: https://www.facebook.com/elsalvadorcom/posts/947662588603648?comment_id=947746768595230&offset=0&total_comments=592&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 fialan-tsiny : http://www.theguardian.com/world/2015/sep/11/something-snapped-hungarian-camera-operator-apologises-kicking-refugees